Iimpawu eziBalaseleyo zeMT4-Icandelo 1-Funda ukuRhweba
Iimpawu eziBalaseleyo zeMT4-Icandelo 1
Iimpawu 'ezimele-ube nazo' zeMT4 zakho!
Iqonga leMetaTrader4 yayiliqonga lokuqala eliphambili lokurhweba eliphuhliswe yiMetaQuotes Software kwii-2000s zokuqala kwaye ziyilelwe ukuthengisa. Kwafika simahla kubarhwebi abancinci abathengisayo kwaye yaziwa kakhulu phakathi koluntu lokurhweba. Kule mihla, phantse wonke umrhwebi ubonelela ngeMT4 kubaxhasi babo. Kodwa esinye sezizathu eziphambili zeqonga le-MT4 laye lathandwa ngokulula kukusetyenziswa kunye neempawu ezintle ezibonelelweyo. Kodwa khange ibonakale njengokuba injalo ngoku; yaqala njengephakheji yokutshata elula kwaye yaphuculwa ukutyhubela iminyaka, ngokuqhubekayo ukongeza amanqaku amatsha. Ngoku iqonga le-MT4 libonelela ngeendlela ezininzi.
Isebenziseka kakuhle Esinye sezizathu zokuba iqonga le-MT4 lithandwe kakhulu ngenxa yokuba lalinonxibelelwano oluhle kakhulu-okwenza kube lula ukuyisebenzisa. Inazo zonke izinto ezifanelekileyo kuzo zonke iindawo ezifanelekileyo; unecandelo leetshathi kanye embindini uthatha elona nxalenye likhulu leqonga. Phezulu kweqonga licandelo lezalathi, eziva kamnandi kakhulu kuba licandelo apho uza kusebenza kakhulu. Ngaphezulu ngasekhohlo, kukho ibhokisi yokubukela yentengiso, eqala ngababini bemali kwaye ilandelwe ngamanani, izinyithi ezixabisekileyo njl njl. Apha ngezantsi kukho ibhokisi yomlawuli kunye nazo zonke iiakhawunti zakho kunye nabacebisi abaziingcali. Emazantsi ungayifumana i-terminal enamacandelo angaphezu kweshumi, anje ngala:
Ungawahambisa amacandelo ahlukeneyo eqonga ngokunjalo, kodwa kutheni usenza loo nto xa yonke into ibekwe ngolungelelwano olufanelekileyo? Abanye banokuthi i-MT4 ijongeka inobuhlobo kakhulu kuba siqhelene nayo… kwaye ngexa oko kunokuba yinyani kwinqanaba elithile, ndikufumanisa kulula kakhulu ukuyisebenzisa.
Zonke iifestile zeqonga le-MT4 kuguqulelo olungagqibekanga.
Iiakhawunti ezininzi -I-MT4 ikuvumela ukuba urhwebe iiakhawunti ezininzi ukusuka kwelinye iqonga. Isenokungavakali ngathi yinto enkulu kwabanye, kodwa oku kubaluleke kakhulu kubarhwebi abaninzi. Ndineeakhawunti ezimbini eziphilayo kunye nomrhwebi ofanayo endizisebenzisela iinjongo ezahlukeneyo. Enye yazo yiakhawunti eqhelekileyo, esetyenziselwa urhwebo lwemihla ngemihla kunye nenye iakhawunti encinci endiyisebenzisayo ukuzama iindlela ezintsha, izikhombisi ezahlukeneyo, kunye nokuseta. Ndingazama amaqhinga amatsha kwiakhawunti yedemo, kodwa urhwebo lwedemo alusondeli ekurhwebeni ngalo, ke ngaphandle kokuba udlala ngokujikeleza ukubulala ixesha kufuneka ulizame kwiakhawunti ephilayo. Nangona kunjalo, oko kuya kuba yinto engathandekiyo ngaphandle kokukhetha ukuthengisa iiakhawunti ezininzi kwiqonga elinye. Kuya kufuneka uvale iqonga kwaye uphinde uliqale phantsi ukuze ungene kunye neakhawunti enye. Kodwa ngelo xesha, kwaye inkqubo inokuthatha ukuya kwimizuzu embalwa, ithuba lokurhweba lisenokuba sele liphelile.
Umphathi weeakhawunti ezininzi zeMT4
Urhwebo oluzenzekelayo -Urhwebo kwiimarike zezemali sele luzenzekelayo kule mihla. Abathengisi abaninzi ngoku basebenzisa iirobhothi kunye naBacebisi ngeeNgcali (EAs) ukwenza urhwebo lwabo okanye ukufumana imiqondiso yorhwebo. I-MT4 iphambili phambili ngokubhekisele kurhwebo oluzenzekelayo / lwealgorithmic. Inesoftware enobuchule kakhulu ye-MQL eyenza ukuba kube lula kubarhwebi kunye nabaphuhlisi ukuba baphuhlise kwaye basebenzise ezabo iinkqubo ezizenzekelayo. Ngapha koko, ukukhululeka kwamandla ayo okwakha kunye nokuphumeza iinkqubo ezizenzekelayo sesinye sezizathu ezibini sokuba i-MT4 ithandwe kangaka. Iqonga lisebenzisa i-MQL4 IDE (Indalo yoPhuculo oluHlangeneyo), ekuvumela ukuba wakhe inkqubo yakho yorhwebo oluzenzekelayo. Ngenye indlela, ungathenga inkqubo kwaye uyisebenzise kwiqonga, okanye uthenge isoftware kunye neerobhothi zokurhweba ngokuthe ngqo. I-MT4 ine-debugger eyakhelweyo ngaphakathi neyenza ukuba kukhuseleke ukufaka iinkqubo ezithengiweyo. Unokuvavanya kwakhona inkqubo oyithengayo okanye oyiphuhlisayo, oko kuthetha ukuba ungayisebenzisa kwiitshathi zembali kwi-MT4 kwaye ufumane iziphumo. Ngale ndlela unokubona ukuba ngaba inkqubo ezenzekelayo ibikhe yasebenza ngaphambili kwiimeko zentengiso yokwenyani ngaphandle kokuthatha umngcipheko wokuzama ngexesha lokwenyani.
Uluntu lweMQL4 -Kukho abarhwebi abambalwa kule mihla abanikezela ngorhwebo lwentlalo njengeTradeO kunye ne-eToro, apho abarhwebi banokulandela abanye abathengisi abaphumeleleyo - kodwa akukho namnye oza kufutshane noluntu lweMQL4. Uluntu lwe-MQL4 lwenziwe ngabarhwebi kubo bonke abathengisi, ke kufana nendawo yentengiso efanelekileyo yemiqondiso. Nokuba ungathengisela bani kwiakhawunti, unokuba yinxalenye yoluntu lwe-MQL4 ukuba usebenzisa iqonga le-MT4. Ungaya kwiwebhusayithi ye-MQL4 okanye uvule icandelo leempawu ezantsi kweqonga kwaye ukhethe ukuba yeyiphi umrhwebi oza kulandela emva kokuthelekisa ukusebenza kwabo. Inqaku elongezelelekileyo elinikezelwa luluntu lwe-MQL4 kukuba ungathengisa imiqondiso yakho. Ukuba ungumrhwebi ophumeleleyo ungabhalisa njengomthengisi womqondiso kwaye amanye amalungu oluntu aya kuyihlawula imali yakho yobhaliso yenyanga xa uthatha isigqibo sokuthengisa inkonzo. Emva koko, baya kuba nakho ukukopa ukuthengisa kwakho kwiiakhawunti zabo kwiqonga le-MT4.
Uluntu lweMQL4 lolona luntu lukhulu kurhwebo.
Izalathi ezininzi Iqonga leMetaTrader yeyona ndawo indala yokuthengisa, ngenxa yokuhamba kweminyaka eli-15 inani kunye nomgangatho wezalathi ezakhelweyo sele unyukile. Kukho uluhlu olubanzi lwezikhombisi eziza simahla ngeqonga le-MT4, njenge: Ukuhambisa iAverage, Stochastic, Trendline, Fibonacci, RSI, Ichimoku njl.njl. Kuyinyani ukuba ukuthengisa kwintengiso kwi-Intanethi kufike indlela ende, kwaye kuyacaca ukuba baninzi ababoneleli bezalathiso phaya kwezi ntsuku. Kodwa, uninzi lwazo luyafumaneka xa uthenga kwaye kuya kufuneka ukhuphele kwaye uzilayishe eqongeni. Ukuthetha ngamava, izikhombisi zeMT4 kulula kakhulu ukuzisebenzisa nokuziqonda. Ngaphandle kwalonto ihlaziywa ngokuzenzekelayo nayo, ekugcinayo kobunzima bokuyihlaziya kunye nokuhlaziya. Izalathi zeMT4 zidweliswe ngokwamacandelo ama-5:
Ilungiselelwe i-smartphone - Abarhwebi abahlukeneyo bathanda imiba eyahlukeneyo yeqonga ngokuxhomekeke kwindlela abathengisa ngayo, kodwa kum inqaku lokurhweba ngefowuni le-MT4 lelona libaluleke kakhulu. Ndingumrhwebi wosuku ngoko ndihlala ndijonga imarike rhoqo. Ngaphandle kwentengiso yeselfowuni ye-MT4, bendiya kubambeka eofisini yam phambi kwesikrini imini yonke. Ngeqonga leselula le-MT4, ndinokuthi ndibeke iliso kwimarike kwifowuni yam kwaye ndivule / ndivale imisebenzi. Inguqulelo yeselfowuni ayifani ncam nenguqulelo yePC, kodwa inika uninzi lwemisebenzi yeqonga elisekwe kwiPC. Kukho izixhobo zokuhlaziya kunye nezalathi ezingaphezulu kwama-60; Unokufumana izilumkiso zeendaba, imiqondiso, kunye nokufikelela kwimakethi yeMetaTrader ukuthenga izikhombisi kunye nesoftware ezenzekelayo kwaye uzifake kwiqonga leselula, njl.njl. thengisa isitopu, thenga / thengisa umda kwaye uthenge / uthengise umda wokumisa.
Ndizidwelisile njengezona zinto zibalaseleyo zeMT4 kuba zenza urhwebo lube lula kakhulu kuwe. Ukhetho oluninzi lweakhawunti likuvumela ukuba utshintshe ushiye enye iakhawunti uye kwenye usebenzise iindlela ezahlukeneyo. I-MQL4 IDE yenza urhwebo oluzenzekelayo lube lula kakhulu. Ukusetyenziswa kwe-smartphone kukuvumela ukuba uthengise naphi na apho ukhoyo. Izikhombisi kulula kakhulu ukuzisebenzisa. Uluntu lwe-MQL4 lubonelela ngamathuba amaninzi okulandela abanye abathengisi abaphumeleleyo kwaye uthengise imiqondiso yakho. Abanye abathengisi banokhetho olwahlukileyo kodwa ezi zinto zimi phezulu.
Oku kunokuba ngumdla kuwe:
Check out our Forex Trading Platforms ncomo.
Unokufunda ngakumbi malunga nendlela yokwenza create your own trading plan.
Umbhali: UMichael Fasogbon
Ukuhlaziywa kokugqibela: Meyi 23rd, 2022
UMichael Fasogbon ngumthengisi oqeqeshiweyo we-Forex kunye nohlalutyo lobuchwephesha lwe-cryptocurrency ngaphezulu kweminyaka emihlanu yamava okuthengisa. Kwiminyaka eyadlulayo, waba nentshisakalo ngetekhnoloji ye-blockchain kunye ne-cryptocurrency ngodadewabo kwaye ukusukela oko wayelandela umbane wentengiso.